सफल युवा औषधि उद्यमी सन्तोष बरालको १० वर्षको यात्रा « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
जसलाई आफूले उत्पादन गरेको ब्रान्ड बजारमा ल्याउने हुटहुटीले निकै तताएको थियो
२०७९, २१ बैशाख बुधबार १५:५७ मा प्रकाशित
सन्तोष बराल नेपाली औषधि कम्पनि ‘आदी रेमिडिज प्रा.लि.’ का प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । नेपाल औषधि उत्पादन संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका बरालको करियरमा संघर्षको कथा निकै रोमाञ्चकारी छ । सर्लाहीको कालिन्चौरमा जन्मिनुभएका सन्तोष हाल ४० औं वसन्तमा हुनुहुन्छ । सानै उमेरमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल उहाँ धैर्यताकासाथ औषधि उद्योगलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ । भन्नुहुन्छ—‘व्यापारिक पृष्ठभूमि नभएको, किसानी र जागिरे परिवारबाट आएको सबैभन्दा सानो उद्यमी म नै हुँला । बेलैमा कल्पना गरेको सोच अहिले आएर सार्थक भएको छ ।’
औषधिको डिस्ट्रीव्युटर्स देख्दा रनभूल्ल
स्नातक अध्ययनका लागि काठमाडौं आएका सन्तोषलाई टिक्न जागिर खानुपर्ने थियो । वि.सं २०६० सालतिर एउटा औषधिको होलसेलमा जागिर पाउनुभयो । ‘औषधिको डिस्ट्रिव्युटर्स ठूलै हुने रहेछ । शुरुमा आत्तिएँ । गाउँमा औषधिको नाममा सिटामोलको नाम मात्र सुनेको मान्छे । २२ वर्षको केटोलाई औषधिको डिस्ट्रिव्युटर्स गोदाममा लगेर औषधि देखाउँदा रनभुल्ल भएको थियो ।
औषधिबारे धेरै ज्ञान थिएन ।’—भन्नुहुन्छ—‘तर मलाई डिस्ट्रिव्युटर्स सञ्चालक बद्रीप्रसाद श्रेष्ठले १५ दिन लगाएर औषधिबारे धेरै जानकारी गराउनुभयो । बजारमा लगेर काम गर्ने तरिका सिकाउनुभयो । करिब तीन वर्ष उहाँको छत्रछायाँमा रहेर औषधि कसरी बेच्ने ? भुक्तानी कसरी लिने ? ग्राहकसँग कसरी बोल्ने ? सामानको अर्डर कसरी लिने ? लगायतका आधारभूत कुरा सिक्ने मौका पाएँ ।’
क्यासेट बिक्रीले दिएको अठोट
सन्तोषले २८ वर्षको उमेरदेखि औषधि उद्योगको कल्पना गर्नुभएको थियो । २०५८ सालको जनगणनामा आएको तलबले लालबन्दीमा केही साथीहरुसँग मिलेर अडियो, भिडियोको व्यापार गरेका थियौं । ‘अर्काको क्यासेट किन बिक्री गर्ने ? आफ्नो नामको ब्रान्ड किन उत्पादन नगर्ने ? जस्ता सोचले विस्तारै आफैँले उत्पादन गरेको सामान बिक्री गर्ने अठोट लिँदै अघि बढेको थिएँ । तर केही पारिवारिक कारणले जागिर खाने सिलसिलामा औषधिको डिस्टिव्युटर्ससम्म पुगेँ र त्यहींबाट औषधिको बजार बुझ्ने मौका मिल्यो । बजारमा हिँड्ने एमआर देखेर एमआर बन्ने इच्छा जाग्यो र आयुर्वेद कम्पनिमा पहिलो एमआरको जागिरबाट आफूलाई स्थापित गराएँ ।
सँगसँगै साथीको सहयोगमा औषधि इम्पोर्टमा पनि पाइला अगाडि बढाएँ र अडियोभिडियो पसल हुँदै देखेको आफ्नो ब्रान्डको सपना औषधिमा पूर्णता दिने प्रयास बमोजिम औषधि उद्योगको खाका तयार पारेँ’—सन्तोष भन्नुहुन्छ—‘शुरुमा काम गर्ने क्रममा एउटा साथीले इम्पोर्टमा लगानी गर्न सल्लाह दिए र सोही बमोजिम लगानी गरेँ । इम्पोर्टमा मार्केटिङ म्यानेजर भएर केही समय काम गरेँ । त्यसपछि आदी रेमिडिज औषधि कम्पनि शुरु गर्ने सोच आयो’ । आदी रेमिडिज शुरु गरेको पनि १० वर्ष भयो ।
सुरुका दिनमा बजारमा स्थापित हुन साह्रै सकस भयो । सर्वप्रथम त कसैले पत्याएनन् । परिवार, साथीभाइले पनि विश्वास गरेनन् । भन्नुहुन्छ—‘हुन त मलाई धेरैले प्रयोग गर्न नखोजेका पनि होइनन् । तर मेरो एउटै अठोट थियो— ‘जसरी हुन्छ, आफ्नो ब्रान्डको सामान बजारमा ल्याउने ।’ उद्योग सञ्चालन गर्ने एकतर्फी जिद्दीपन थियो । २२ वर्षको उमेरमा औषधि डिस्ट्रिब्युटरमा सामान्य काम सिक्दै इम्पोर्टर, एमआर र म्यानेजर समेतको जागिर खाएर १० वर्षभित्रमा उद्योग ल्याउन सफल भएको हो ।’
‘त्यो बेला मलाई यूरोप, अमेरिकातिर जाने रहर लागेको थियो । त्यो बेलाको माहोल नै विदेश जाने थियो ।’—सन्तोष भन्नुहुन्छ—‘विदेश जान दुई पटक अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि पनि सोच परिवर्तन गरेँ । विदेशमा गएर दुःख गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा दुःख गर्छु भन्ने लाग्यो ।’
सफलतामा सोचको समायोजन
‘हाम्रो प्राथमिकता छालासम्बन्धी असरदार औषधि बनाउने हो । कम्पनीका टेक्निकल डारेक्टर प्रकाश बिष्टले हरेक पाइलामा सहयोग गर्नुभएको छ । विष्ट र मेरो सोचको समायोजनले कम्पनिको उचाई बढेको छ । सफलता प्राप्त गर्न धैर्य र साहस महत्वपूर्ण हुने रहेछ । व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट नआएको मान्छेले झन् धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ । आफ्नो कामप्रतिको निरन्तरता नै सफलताको राज हो । आमा सरकारी जागिरे र बुवा राजनीतिमा ।
व्यापारलाई सहजताको रुपमा लिने पारिवारिक वातावरण थिएन ।’— भन्नुहुन्छ—‘मैले जागिर खाँदा खुसी भएका मेरा आमाबुवा व्यापारिक सोच देखेर दुःखी पनि हुनुभएको थियो । तर जति संघर्ष गर्यो, त्यति नै खारिने मौका मिल्दो रहेछ । शुरुका दिनमा जे भएपनि प्रगतिको पथमा अगाडि बढ्न घचघच्याइरहने मेरो बुबा महान हुनुहुन्छ । छोराले घर छोडेपछि मात्र सफल व्यक्ति बन्छ भन्ने बुवाकोे विश्वासले नै मलाई यहाँसम्म पुर्याएको हो ।
जागिर गरेको कमाइले केही जग्गा किनेको थिएँ । व्यवसाय सुरु गर्दा उक्त घडेरी बिक्री गर्नुप¥यो । अहिले १३ जना सेयर सदस्यसहित आदी रेमिडिज करिब ३० करोड रुपियाँको लगानीमा शुरु भएको थियो ।’
पहिचान नै सफलता
समाजले व्यक्तिगत विलाशिताका वस्तुलाई सफलता मान्ने रहेछ । ‘घर, गाडी, जग्गा जोड्नुलाई समाजले प्रगतिको रुपमा लिने गर्छ ।’—भन्नुहुन्छ—‘तर मेरो सोच ठिक विपरीत छ— ‘उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ घरजग्गाले पहिचान दिन सक्दैन । अहिलेको मेरो जुन परिचय र इमेज छ, यसले मलाई आत्मसन्तुष्टि र समाजमा पहिचान बनाउन सफलता मिलेको छ । उद्योगबाट गुणस्तरीय औषधि बनाउनु पहिलो धर्म हो । त्यसमा कुनैपनि शर्त प्रयोग गर्न हुँदैन । उद्योगको कम्पाउण्डबाहिर आइसकेपछि म पनि एक व्यापारी हुँ । व्यापारको अर्कोे धर्म हो—नाफा । जागिर गरेको भए शायद म सन्तोष बराल हुदैनथँे ।
आज म जे छु त्यो आफ्नै लागि गरेको कामको देन हो ।’ व्यवसायमा नाफा घाटाको गणितीय हिसाबकिताव हुनु त स्वभाविक हो । तर त्यो भन्दा पनि आफूले उत्पादन गरेको ब्रान्ड बजारमा ल्याउने हुटहुटीले सन्तोषलाई निकै ततायो । काठमाडौँमा संघर्ष गर्दैगर्दा औषधि क्षेत्रमा कार्यअनुभव सँगाल्नुभयो । यसले औषधि उद्योगको क्षेत्रमा अघि बढ्न सहयोग मिलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
श्रीमतीको प्रोत्साहन र धैर्यता
‘हरेक पुरुषको सफलताको पछाडी महिलाको हात हुन्छ’ भन्ने भनाई मेरो जीवनमा पनि चरितार्थ भयो । उद्योग सञ्चालन गर्ने हुटहुटीले करिब २५ महिना बेरोजगार बस्दापनि उद्योगलाई निरन्तरता दिन उनको प्रोत्साहन जारी रह्यो । सीमित आम्दानीका वावजुद पनि परिवारको आर्थिक व्यवहार सम्हालिन् । यसले मलाई सफलता प्राप्त गर्न धेरै सहयोग पुग्यो ।’ भन्नुहुन्छ—‘व्यवसायिक संघर्षको शिलशिलामा धेरै समस्या आउने रहेछन् । औषधि व्यवसायको क्रममा पार्टनरशिप टुट्दा मोटिभेसनल पाटो चाहिँदो रहेछ जुन मलाई बिनोद चौधरीको आत्मकथा किताबको अध्ययनबाट मिल्यो । चौधरीद्वारा लिखित सो किताबबाट प्रभावित भएर साथीसँग अलग हुने निर्णय गरेँ । त्यो किताब नभएको भए मुद्धामामिला भएर बस्थ्यौं होला ।’
सकारात्मक सोचको खाँचो
छालासम्बन्धी औषधिलाई निरन्तरता दिइरहेको कम्पनिले इन्जेक्टेवल, आइटमतर्फ फड्को मार्ने योजना बनाउँदै छ । कम्पनि लन्चिङ गरेकै वर्ष भूकम्प, ६ महिनाको नाकाबन्दी, कोरोना महामाहारीले व्यवसायमा निकै समस्या दियो । लगानी गरेको सामान बेच्दा नाफा चाहिन्छ भन्ने सोच राज्यले राखिदिएमा मात्र पनि औषधि व्यवसाय र उद्योगीलाई सहयोग पुग्ने सन्तोषको भनाइ छ ।
Email : nepa[email protected]